October | 2015 | linyeikhtin
ဆန်းလ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းဘယ်သူမှမရှိ။ မေမေကအလုပ်သွားသည်။ မမကကျောင်းသွားသည်။
တစ်မနက်လုံးလိုလိုငိုထားရသဖြင့် မျက်ခွံတွေကမို့အစ်နေသလို မျက်လုံးတွေက ကျိန်းစပ် နေသည်။ ထမင်းစားချင်စိတ်လည်းမရှိ။ လူက အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့နေသူလို ငေါင်တောင်တောင်ဖြစ်ကာ ကုတင်ပေါ်အရုပ်ကြိုးပြတ်လှဲချလိုက်သည်။
ငါကလူပိုလား။ ငါကသူများတွေကို စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နေတဲ့သူလား။ ငါ့ ငါ့ကို ဘယ်သူမှမလိုအပ်ကြတော့ဘူးလား။
သူမအရူးတစ်ယောက်သဖွယ် ပါးစပ်ကတစ်တွတ်တွတ် ရေရွတ်နေမိသည်။
နောက်တော့ မတ်တပ်ထရပ်ကာသူမအဝတ်ဗီရိုကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ထိုအထဲက ကို့မွေးနေ့ ရောက်ရင်ကို့ကိုပေးဖို့ဝယ်ထားသော ဝက်ဝံရုပ်လေးကိုထုတ်ပြီး ခုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် စာအုပ်စင်အောက်က စာအုပ်အဖုံးချုပ်သည့်ပစ္စည်းများထုတ်ကာ နွေဦးစာအုပ်လေးကို ချုပ်ပေးလိုက်သည်။ စာအုပ်အဖုံးချုပ်ပြီးသွားတော့ စက္ကူရုပ်လေးတွေချိုးသည်။ ထုံးစံအတိုင်းကြိုးကြာရုပ်လေးတွေ………။
✽✽✽ ✽✽✽ ✽✽✽
ဒီနေ့ နွေဦးတစ်ခုခုကိုအလိုမကျဖြစ်နေသည်။ ဘာကို အလိုမကျမှန်းလည်းမသိ။
သူလည်းပြဲပါစေဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။
ဒါဖြင့် ဆန်းလကိုဝင်တိုက်တဲ့စက်ဘီးသမားလား။ ဒါလည်းမဟုတ်။ သူလည်း ဆန်းလ ဒီလမ်းကလာမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိမှာလဲ။
တစ်ကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်မိခြင်းသာ။ ဒီနေ့ရခဲ့သည့်စာအုပ်က စာအုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင်အစ်မချန်ထားတာမဟုတ်။ ကဗျာဆရာ”ရိုး”က တော်ဝင်စင်တာမှာ ဒီနေ့သူ့စာအုပ်ဝယ်သည့် သူ့ပရိသတ်များကို လက်မှတ်ထိုးပေးမည်ဟုကြားသဖြင့် နွေဦးလူတိုးခံပြီးခက်ခက်ခဲခဲဝယ်ထားရသည့် စာအုပ်…။
အမှန်ဆို ဆန်းလကို ဒီနေ့တော့ဒီပွဲရှိတယ်။ တော်ဝင်စင်တာကိုလာခဲ့လို့ သူမပြောရမယ့် တာဝန်ရှိပေမယ့် သူမမေ့လျော့ခဲ့သည်။
ဆန်းလ ဒီစာအုပ်ကို ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုတာ သူမအသိဆုံး။
သူမသာ ဆန်းလကိုခေါ်ဖို့မမေ့လျော့ခဲ့လျှင် ဒီနေ့လိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်လာမည်မဟုတ်။
တစ်ကယ်ဆို စာအုပ်ဖြင့်မျက်နှာကိုအပေါက်ခံရသူမှာ သူမသာဖြစ်သင့်သည်။
“အင်း…ငါ လူကိုယ်တိုင်သွားပြီး ဆန်းလကိုတောင်းပန်ရမယ်”
ဖိနပ်ကို အိမ်ရှေ့ဖိနပ်စင်မှာချွတ်လိုက်ပြီး ဆိုဖာပေါ်မှာခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်သည်။
ထိုစဉ် ဆိုဖာရှေ့က စားပွဲပေါ်တင်ထားသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကြောင့် သူမမျက်ခုံးအစုံ မြင့်တက်သွားသည်။
အဖုံးချုပ်ထားသည့်စာအုပ်မို့ ဘာစာအုပ်လဲလို့ ဆွဲယူကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ်ထဲကနေ အဖြူရောင်ကြိုးကြာရုပ်လေးတစ်ရုပ်ထွက်လာသည်။
သေချာသည်။ ဒါ သူမစာအုပ်မှ သူမစာအုပ်စစ်စစ်။
“ဟို…မမဆန်းလက မမအတွက်ဆိုပြီး အဲဒီစာအုပ်လာပေးထားတာပါ”
ဆန်းလလာပေးထားတာဆိုတော့ သူငါ့ကိုတောင်းပန်တဲ့သဘောလား။ ဒါဖြင့် ကြိုးကြာရုပ် ကဘာသဘောလဲ။
မရေရာသည့်အတွေးတို့ခဏဖြတ်ကာ စာအုပ်ထဲကပြုတ်ကျလာသည့် ကြိုးကြာရုပ်လေးကို အသေအချာပြန်ကြည့်မိသည်။
သူမအလျင်စလိုပင် ကြိုးကြာရုပ်လေးကို ပြန်ဖြည်လိုက်တော့ အထဲမှာစာတစ်ချို့ရေးထား သည်ကို တွေ့လိုက်ရ၏။
ပြောရလျှင်ဆန်းလကသနားဖို့ကောင်းသည်။ သူ့ကိုမျက်နှာတစ်ချက်အညှိုးမခံ။ ဒီနေ့လိုမျိုး အတန်းမတက်ဖို့ပူဆာသည်ဆိုတာ ဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်။
တစ်ခြားအချိန်တွေဆို သူဒီလောက်လျစ်လျူရှုမိမှာမဟုတ်ပေမယ့် အခုဆရာအချိန်က သိပ်အရေးကြီးလွန်းသည်မို့ ခံစားချက်ကိုမေ့ထားလိုက်ရသည်။
ဒီနေ့ညနေ ဒါမှမဟုတ်လည်း မနက်ဖြန်ရောက်မှ သူမကိုကစားကွင်းခေါ်သွားပြီး Suprise တစ်ခုခုလုပ်ပေးတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“ဒီနေ့ညနေ အိမ်ကိုသွားပြီးတောင်းပန်လိုက်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကစားကွင်းခေါ်သွားမယ်။ စိတ်ကောက်နေသေးလို့ မလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း မနက်ဖြန်ရောက်တော့မှပေါ့”
ထိုစဉ် ဧည့်ခန်းထဲတွင် သတင်းစာဖတ်နေသော အမေ့ကိုတွေ့သဖြင့်
“လာပါ လာပါ။ ငါနင့်ကိုတွေ့ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲကိုယ်တော်”
ခရီးရောက်မဆိုက် အမေကတွေ့ချင်သည်ဟုဆိုသည်။ မျက်နှာပေးကလည်း သူ့ကိုဆူမည့် ပုံစံမို့
“ဆန်းလလေးကိုသိပ်မဆူပါနဲ့သားရယ်။ ခမျာသနားပါတယ်။ သားကိုလည်းချစ်ရှာသားနဲ့”
“လိမ်မနေနဲ့လင်းရောင်။ ကောင်မလေးမျက်လုံးတွေများ မို့အစ်နေတာပဲ။ အဲဒါ နင်ဆူထား လို့မဟုတ်လား”
“အာ…မဟုတ်ပါဘူးအမေရာ။ ကျွန်တော်မဆူပါဘူး။ ဒါနဲ့သူကအိမ်ကိုဘာလာလုပ်တာလဲ”
“အေးလေ မဆူလည်းပြီးတာပဲ။ သူများသားသမီးကို မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျအောင် မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။
ရော့ ရော့ ဒီမှာ။ဒီအရုပ်လေးလာပေးတာ။ မင်းအတွက်တဲ့”
အမေကပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူ့လက်ထဲသို့ဝက်ဝံရုပ်လေးထိုးထည့်ကာ အိမ်အနောက်ဖက် ဝင်သွားလေသည်။
သူကတော့ လက်ထဲရောက်လာသည့် ဝက်ဝံရုပ်လေးကိုသေသေချာချာကြည့်မိသည်။
ဝက်ဝံရုပ်လေးကဘာမှမထူးခြား။ သာမန်အရုပ်တစ်ခုသာ။ သို့သော် အရုပ်လည်ပင်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားသည့် အပြာရောင်ကြိုးကြာရုပ်လေးကတော့ ထူးခြားသည်ဟုဆိုရမည်။
အရုပ်လည်ပင်းက ကြိုးကြာရုပ်လေးကိုအသာဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီး သူစေ့စေ့စပ်စပ်လိုက်ကြည့် တော့ အရုပ်ကိုယ်ထည်အတွင်းဖက်တွင် မှင်စတစ်ချို့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် ကြိုးကြာရုပ်လေးကိုဖြည်လိုက်ပြီး အတွင်းဖက်တွင်ရေးထားသည့် စာတစ်ချို့ကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့
ဆနျးလ အိမျကိုပွနျရောကျတော့ ထုံးစံအတိုငျးဘယျသူမှမရှိ။ မမေကေအလုပျသှားသညျ။ မမကကြောငျးသှားသညျ။
တဈမနကျလုံးလိုလိုငိုထားရသဖွငျ့ မကျြခှံတှကေမို့အဈနသေလို မကျြလုံးတှကေ ကြိနျးစပျ နသေညျ။ ထမငျးစားခငျြစိတျလညျးမရှိ။ လူက အသိဥာဏျကငျးမဲ့နသေူလို ငေါငျတောငျတောငျဖွဈကာ ကုတငျပျေါအရုပျကွိုးပွတျလှဲခလြိုကျသညျ။
ငါကလူပိုလား။ ငါကသူမြားတှကေို စိတျဒုက်ခရောကျအောငျ လုပျနတေဲ့သူလား။ ငါ့ ငါ့ကို ဘယျသူမှမလိုအပျကွတော့ဘူးလား။
သူမအရူးတဈယောကျသဖှယျ ပါးစပျကတဈတှတျတှတျ ရရှေတျနမေိသညျ။
နောကျတော့ မတျတပျထရပျကာသူမအဝတျဗီရိုကိုဖှငျ့လိုကျသညျ။ ထိုအထဲက ကို့မှေးနေ့ ရောကျရငျကို့ကိုပေးဖို့ဝယျထားသော ဝကျဝံရုပျလေးကိုထုတျပွီး ခုတငျပျေါတငျလိုကျသညျ။
တဈဆကျတညျးမှာပငျ စာအုပျစငျအောကျက စာအုပျအဖုံးခြုပျသညျ့ပစ်စညျးမြားထုတျကာ နှဥေီးစာအုပျလေးကို ခြုပျပေးလိုကျသညျ။ စာအုပျအဖုံးခြုပျပွီးသှားတော့ စက်ကူရုပျလေးတှခြေိုးသညျ။ ထုံးစံအတိုငျးကွိုးကွာရုပျလေးတှေ………။
ဒီနေ့ နှဥေီးတဈခုခုကိုအလိုမကဖြွဈနသေညျ။ ဘာကို အလိုမကမြှနျးလညျးမသိ။
သူလညျးပွဲပါစဆေိုပွီး လုပျခဲ့တာမှ မဟုတျတာ။
ဒါဖွငျ့ ဆနျးလကိုဝငျတိုကျတဲ့စကျဘီးသမားလား။ ဒါလညျးမဟုတျ။ သူလညျး ဆနျးလ ဒီလမျးကလာမယျဆိုတာ ဘယျလိုသိမှာလဲ။
တဈကယျတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုမကနြေပျမိခွငျးသာ။ ဒီနရေ့ခဲ့သညျ့စာအုပျက စာအုပျဆိုငျ ပိုငျရှငျအဈမခနျြထားတာမဟုတျ။ ကဗြာဆရာ”ရိုး”က တျောဝငျစငျတာမှာ ဒီနသေူ့စာအုပျဝယျသညျ့ သူ့ပရိသတျမြားကို လကျမှတျထိုးပေးမညျဟုကွားသဖွငျ့ နှဥေီးလူတိုးခံပွီးခကျခကျခဲခဲဝယျထားရသညျ့ စာအုပျ…။
အမှနျဆို ဆနျးလကို ဒီနတေ့ော့ဒီပှဲရှိတယျ။ တျောဝငျစငျတာကိုလာခဲ့လို့ သူမပွောရမယျ့ တာဝနျရှိပမေယျ့ သူမမလြေ့ော့ခဲ့သညျ။
ဆနျးလ ဒီစာအုပျကို ဘယျလောကျလိုခငျြလဲဆိုတာ သူမအသိဆုံး။
သူမသာ ဆနျးလကိုချေါဖို့မမလြေ့ော့ခဲ့လှငျြ ဒီနလေို့အဖွဈမြိုးဖွဈလာမညျမဟုတျ။
တဈကယျဆို စာအုပျဖွငျ့မကျြနှာကိုအပေါကျခံရသူမှာ သူမသာဖွဈသငျ့သညျ။
“အငျး…ငါ လူကိုယျတိုငျသှားပွီး ဆနျးလကိုတောငျးပနျရမယျ”
ဖိနပျကို အိမျရှဖေိ့နပျစငျမှာခြှတျလိုကျပွီး ဆိုဖာပျေါမှာခွပေဈလကျပဈထိုငျခလြိုကျသညျ။
ထိုစဥျ ဆိုဖာရှကေ့ စားပှဲပျေါတငျထားသညျ့ စာအုပျတဈအုပျကွောငျ့ သူမမကျြခုံးအစုံ မွငျ့တကျသှားသညျ။
အဖုံးခြုပျထားသညျ့စာအုပျမို့ ဘာစာအုပျလဲလို့ ဆှဲယူကွညျ့လိုကျတော့ စာအုပျထဲကနေ အဖွူရောငျကွိုးကွာရုပျလေးတဈရုပျထှကျလာသညျ။
သခြောသညျ။ ဒါ သူမစာအုပျမှ သူမစာအုပျစဈစဈ။
“ဟို…မမဆနျးလက မမအတှကျဆိုပွီး အဲဒီစာအုပျလာပေးထားတာပါ”
ဆနျးလလာပေးထားတာဆိုတော့ သူငါ့ကိုတောငျးပနျတဲ့သဘောလား။ ဒါဖွငျ့ ကွိုးကွာရုပျ ကဘာသဘောလဲ။
မရရောသညျ့အတှေးတို့ခဏဖွတျကာ စာအုပျထဲကပွုတျကလြာသညျ့ ကွိုးကွာရုပျလေးကို အသအေခြာပွနျကွညျ့မိသညျ။
သူမအလငျြစလိုပငျ ကွိုးကွာရုပျလေးကို ပွနျဖွညျလိုကျတော့ အထဲမှာစာတဈခြို့ရေးထား သညျကို တှလေို့ကျရ၏။
ပွောရလှငျြဆနျးလကသနားဖို့ကောငျးသညျ။ သူ့ကိုမကျြနှာတဈခကျြအညှိုးမခံ။ ဒီနလေို့မြိုး အတနျးမတကျဖို့ပူဆာသညျဆိုတာ ဒါပထမဦးဆုံးအကွိမျ။
တဈခွားအခြိနျတှဆေို သူဒီလောကျလဈြလြူရှုမိမှာမဟုတျပမေယျ့ အခုဆရာအခြိနျက သိပျအရေးကွီးလှနျးသညျမို့ ခံစားခကျြကိုမထေ့ားလိုကျရသညျ။
ဒီနညေ့နေ ဒါမှမဟုတျလညျး မနကျဖွနျရောကျမှ သူမကိုကစားကှငျးချေါသှားပွီး Suprise တဈခုခုလုပျပေးတော့မညျဟု ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။
“ဒီနညေ့နေ အိမျကိုသှားပွီးတောငျးပနျလိုကျမယျ။ ပွီးတာနဲ့ ကစားကှငျးချေါသှားမယျ။ စိတျကောကျနသေေးလို့ မလိုကျဘူးဆိုရငျလညျး မနကျဖွနျရောကျတော့မှပေါ့”
ထိုစဥျ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ သတငျးစာဖတျနသေော အမကေို့တှသေ့ဖွငျ့
“လာပါ လာပါ။ ငါနငျ့ကိုတှခေ့ငျြနတောနဲ့အတျောပဲကိုယျတျော”
ခရီးရောကျမဆိုကျ အမကေတှခေ့ငျြသညျဟုဆိုသညျ။ မကျြနှာပေးကလညျး သူ့ကိုဆူမညျ့ ပုံစံမို့
“ဆနျးလလေးကိုသိပျမဆူပါနဲ့သားရယျ။ ခမြာသနားပါတယျ။ သားကိုလညျးခဈြရှာသားနဲ့”
“လိမျမနနေဲ့လငျးရောငျ။ ကောငျမလေးမကျြလုံးတှမြေား မို့အဈနတောပဲ။ အဲဒါ နငျဆူထား လို့မဟုတျလား”
“အာ…မဟုတျပါဘူးအမရော။ ကြှနျတျောမဆူပါဘူး။ ဒါနဲ့သူကအိမျကိုဘာလာလုပျတာလဲ”
“အေးလေ မဆူလညျးပွီးတာပဲ။ သူမြားသားသမီးကို မကျြရညျပေါကျကွီးငယျကအြောငျ မလုပျပါနဲ့ကှယျ။
ရော့ ရော့ ဒီမှာ။ဒီအရုပျလေးလာပေးတာ။ မငျးအတှကျတဲ့”
အမကေပွောပွောဆိုဆိုနှငျ့ သူ့လကျထဲသို့ဝကျဝံရုပျလေးထိုးထညျ့ကာ အိမျအနောကျဖကျ ဝငျသှားလသေညျ။
သူကတော့ လကျထဲရောကျလာသညျ့ ဝကျဝံရုပျလေးကိုသသေခြောခြာကွညျ့မိသညျ။
ဝကျဝံရုပျလေးကဘာမှမထူးခွား။ သာမနျအရုပျတဈခုသာ။ သို့သျော အရုပျလညျပငျးတှငျ ခြိတျဆှဲထားသညျ့ အပွာရောငျကွိုးကွာရုပျလေးကတော့ ထူးခွားသညျဟုဆိုရမညျ။
အရုပျလညျပငျးက ကွိုးကွာရုပျလေးကိုအသာဆှဲဖွုတျလိုကျပွီး သူစစေ့စေ့ပျစပျလိုကျကွညျ့ တော့ အရုပျကိုယျထညျအတှငျးဖကျတှငျ မှငျစတဈခြို့ကိုတှလေို့ကျရသညျ။
စိတျရှညျလကျရှညျနှငျ့ ကွိုးကွာရုပျလေးကိုဖွညျလိုကျပွီး အတှငျးဖကျတှငျရေးထားသညျ့ စာတဈခြို့ကိုဖတျပွီးခြိနျမှာတော့
This entry was posted in အခန်းဆက်ဝတ္ထု on October 31, 2015 by linyeikhtin.
မနက်ကတည်းက အိမ်မှာတက်လိုက်သည့်ပြဿနာဆိုတာကလည်းတောက်လျှောက်…။ တစ်မနက်ခင်းလုံး လပ်ကီးမကောင်းခဲ့သည်မို့ ကျောင်းမှာရောတစ်ခုခုဖြစ်မလား စိတ်ထဲထင့်နေမိ၏။
သူမ စိတ်ညစ်ညူးစွာဖြင့် ခေါင်းကိုခါယမ်းမိတော့
“ဟေး ဆန်းလ။ ခဏစောင့်ပါဦး”
နောက်ကခေါ်သံကြားသဖြင့် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူမသူငယ်ချင်းနွေဦး။
အနားသို့ရောက်လာသောနွေဦးကလေပူတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်ကာ အနည်းငယ်မောဟိုက် နေသောအသံဖြင့် ဆန်းလကိုပြောလိုက်သည်။
နွေဦးနှာသီးဖျားတွင် ချွေးစက်လေးတွေသီးနေသည်။ နေကလည်းပူသည်ကိုး။
နွေဦးမျက်နှာကိုငေးစိုက်ကြည့်နေသော ဆန်းလမျက်လုံးများက နွေဦးထုတ်ပြသောစာအုပ် လေးပေါ်သို့ရောက်သွားသည်။
ယခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေသော တက်သစ်စကဗျာဆရာ”ရိုး”၏ ကဗျာစာအုပ်။
ပထမဆုံးထုတ်ရောင်းသည့်၃ရက်အတွင်းမှာပင် စာအုပ်ပြတ်သွားသည်အထိ ပရိသတ်များ အားပေးခံခဲ့ရသောကဗျာစာအုပ်။
“ဟုတ်ပါ့ ဆန်းလရေ။ ၃ရက်အတွင်းမှာတင် စာအုပ်ကုန်သွားလို့ ငါနဲ့နင်နဲ့တစ်မြို့လုံးအနှံ့ ပတ်ရှာခဲ့တာလေ”
“အေးလေ အဲဒီတုန်းကမရခဲ့ဘူးလေ။ အခုစာအုပ်က”
ဆန်းလဆီမှအမေးစကားကိုကြားတော့ နွေဦးသူမမျက်လုံးအစုံကိုမှေးစင်းကာပြုံးလိုက်၏။ အပြုံးက”ငါကွ”ဆိုသည့်အပြုံး။
“ဒါက ဒုတိယအကြိမ်ဟ။ ငါနဲ့ခင်တဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကအစ်မကြီးက ဒီစာအုပ်ရောက်တာနဲ့ ငါ့ဆီဖုန်းဆက်လို့ ကျောင်းထဲမရောက်ခင် စာအုပ်ဆိုင်ထဲကဝင်ဝယ်လာတာ”
နွေဦးစကားဆုံးတော့ ဆန်းလစာအုပ်အဖုံးကို ကပျာကယာကြည့်လိုက်သည်။
စာအုပ်အဖုံး၏ဘယ်ဖက်ထောင့်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ဆိုသည့် စာသားကအထင်းသား။
ကဗျာမကြိုက်သူများတောင် လက်ကမချချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်အားကောင်းလွန်း လှသော ကဗျာစာအုပ်သည် သူမတို့လိုကဗျာဝါသနာရှင်များအတွက်တော့ အလေးအမြတ်ပြုစရာ တန်ဖိုးကြီးရတနာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
နောက်ပြီး ကဗျာဆရာကိုယ်တိုင်ကိုက “ဒီစာအုပ်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်ပါ” ဟုကြေညာထားသည်မို့ ပရိသတ်တွေကပိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။
“ဟဲ့…နွေဦး ငါ့အတွက်ရော ငါ့အတွက်ဝယ်လာခဲ့လား”
ဆန်းလတစ်ယောက် ကလေးငယ်သဖွယ် နွေဦးကို အားတက်သရောမေးမိသည်။
သို့သော် ပျက်ယွင်းသွားသည့်သူမမျက်နှာကို ချက်ချင်းပြန်ဖုံးလိုက်ပြီး မထူးခြားသော လေသံဖြင့်
“နင့်အတွက်မပါခဲ့ဘူးဆန်းလရဲ့။ ငါတောင်ဆိုင်ရှင်အစ်မချန်ထားပေးလို့ရတာ။ အားလုံးက လည်းဒီကဗျာစာအုပ်ကို အရူးအမူးဖြစ်နေကြလို့ ဘွတ်ကင်လုပ်ထားတဲ့သူတွေပဲရတယ်ဆရာ။
ဒါပေမယ့် နင်စိတ်မပူပါနဲ့။ နောက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရမယ်တဲ့။ ဆိုင်ရှင်အစ်မက ထပ်မှာ ထားတယ်ပြောတယ်”
နွေဦးစကားကြောင့် အပြည့်အဝဝမ်းမသာနိုင်သော်လည်း ရင်ထဲကအလုံးကြီးကတော့ကျ သွားသည်။ ဘာပဲပြောပြော မရနိုင်တာထက်စာလျှင်တော့ တော်သေးသည်ဟု ဆိုရမည်သာ။
သို့သော် သူလိုချင်သော စာအုပ်ရသွားသဖြင့် ပြုံးပျော်နေသော နွေဦးကိုစချင်လာသဖြင့်
“အေးလေ ဒါဆိုလဲပြီးတာပေါ့နွေဦးရယ်။ ငါနောက်နှစ်ရက်နေမှဝယ်မယ်လေ။ လောလော ဆယ်တော့ နင့်စာအုပ်ငါယူသွားပြီဟေ့”
နွေဦးလက်ထဲပြန်ရောက်နေသောစာအုပ်ကို ဆတ်ခနဲဆွဲလုကာ သူမပြေးလေသည်။
ရုတ်တရက်မို့ နွေဦးလည်းအူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ကာ ရပ်ကြည့်နေမိသည်။ နောက်တော့မှ သူမစာအုပ်ပါသွားမှန်းသိသဖြင့် ဆန်းလနောက်သို့ပြေးလိုက်သည်။
အနောက်ကနွေဦးတစ်ယောက် တစ်ကြော်ကြော်အော်ကာ ပြေးလိုက်လာသည်။
နှစ်ယောက်လုံးကလည်း ချောမောကြသူများမို့ ဘာဘီရုပ်လေးနှစ်ရုပ် စိန်ပြေးလိုက်တမ်း ကစားနေသလိုပင်။
အနောက်ကပြေးလိုက်လာသော နွေဦးကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီး ညာဖက်လမ်းထဲအကွေ့ ထိုလမ်းထဲမှထွက်လာသော စက်ဘီးတစ်စီးက ဆန်းလမျက်လုံးများကိုပြာဝေသွားစေသည်။
စက်ဘီးစီးသူကလက်ကိုင်ကိုကွေ့လိုက်သော်လည်း စက်ဘီးကိုယ်ထည်ကတော့ဆန်းလကို အနည်းငယ်ပွတ်မိသွားသည်။
စက်ဘီးအရှိန်ကြောင့် သူမပုံလျက်သားလဲကျသွားပြီး တစ်ဖက်ကစက်ဘီးလည်း သူမ အနားမှာပင်မှောက်သွားသည်။
ဆန်းလတစ်ယောက် လဲကျရာမှလူးလဲထမိချိန်တွင် သူမလက်ဖျံနေရာကဆစ်ခနဲ နာသွား သဖြင့်ကြည့်မိတော့ ပွန်းသွားသည့်ဒဏ်ရာလေးက သွေးစို့နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
သို့သော် ဒဏ်ရာကိုဂရုမစိုက်အား။ ကဗျာစာအုပ်ကိုသာ ကမန်းကတန်းလိုက်ရှာမိသည်။
သူမပုံစံက အဖိုးတန်ရတနာတစ်ခု ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ကလေးငယ်တစ်ဦးသဖွယ်။
စာအုပ်ကစက်ဘီးအောက်တွင်ပိနေပြီး ပြုတ်ထွက်နေသောအဖုံးနှင့် စာအုပ်အတွင်းသား တို့က တစ်နေရာဆီမှာ။
စာအုပ်ဖုံးကိုဘယ်လက်ကကိုင် စာအုပ်အတွင်းသားကိုညာလက်ကကိုင်ကာ သူမငူငူကြီး ရပ်နေမိသည်။
ပြေးလာသောခြေလှမ်းတစ်စုံက ဆန်းလဘေးတွင်ရပ်သွားသဖြင့် နောက်ကိုလှည့်ကြည့် လိုက်တော့ နွေဦး။
စာအုပ်ကိုတစ်လှည့် သူမကိုတစ်လှည့်ကြည့်နေသည်။ သူမမျက်လုံးတွေက နှမြောတသ နေဟန်။
နွေဦးလေသံကတင်းမာလွန်းလှသလို သူမမျက်လုံးနှစ်လုံးကလည်း ဒေါသအရောင်များ တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသည်မှာ လူကိုစားတော့မည့် ကျားသစ်မလေးတစ်ကောင်သဖွယ်။
“ငါပြန်ဝယ်ပေးပါ့မယ်ဟာ။ နောက်နှစ်ရက်လောက်ဆို စာအုပ်ဆိုင်ကို စာအုပ်ရောက်ပြီ မဟုတ်လား။ ငါအစားပြန်ဝယ်ပေးပါ့မယ်နော်”
ဆန်းလ နွေဦးကိုအနူးအညွှတ်တောင်းပန်နေပေမယ့် နွေဦး၏တင်းမာနေသည့်မျက်နှာ ထားကတော့ ပျော့ပြောင်းမသွားခဲ့။
ထိုအခိုက် တင်းတင်းစေ့ထားသော နွေဦးနှုတ်ခမ်းတစ်စုံကပွင့်ဟလာပြီး “ဒီစာအုပ်က အစားပြန်ဝယ်ပေးလို့မရတဲ့စာအုပ်ပဲဆန်းလ” ဆိုသည့်စကားနှင့်အတူ ကျောခိုင်းလှည့်ထွက်သွားသော မြင်ကွင်းတို့က ဆန်းလအတွက်တော့တုန်လှုပ်ဖွယ်ပင်။
ဆန်းလ ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လိုငိုင်သွားကာ မျက်ရည်တို့ကအဆီးအတားမဲ့စွာကျလာ၏။
စက်ဘီးသမားက “အစ်မဘာဖြစ်သွားလဲ”ဆိုသည့်စကားကိုတောင် သူမအရေးမစိုက်နိုင်။
သူမချစ်ရသည့်သူငယ်ချင်းကိုလည်း နာကျင်အောင်၊ ဝမ်းနည်းအောင်၊ ပင်ပန်းအောင် သူမလုပ်ခဲ့မိပြန်ပြီ။
သို့သော် နွေဦးပြောသွားသည့် စကားတစ်ခွန်းကိုတော့ သူမနားမလည်။
ထိုအတွေးများအားလုံး အဖုံးပြုတ်သွားသည့် စာအုပ်အတွင်းသားလေးကိုကြည့်မိတော့မှ ရှင်းသွားခဲ့သည်။
“ရိုး”ဟုရေးထားသည့် လက်မှတ်လှလှလေးက စာအုပ်ပေါ်တွင်ခံ့ထည်စွာ။
အစ်မကရော၊ အမေကရော နောက်ပြီး အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကပါ လျစ်လျူရှုခံလိုက်ရ သည့်ဘဝမို့ နောက်ဆုံးအားပြုစရာသည် ချစ်သူတစ်ယောက်သာရှိတော့သည်။
ကို့ဆီရောက်လျှင် ကို့ရင်ခွင်ထဲတိုးခွေ့ကာ အားပါးတရငိုမည်။ ကို့ပေါင်ပေါ်ခေါင်းအုံးကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မည်။ ကိုပေးမည့်အနမ်းများနှင့် သူမစိတ်ညစ်ညူးမှုတွေကို ဖြေဖျောက်ပစ်မည်။
သြော်…မေ့တော့မလို့။ အရင်ဆုံးဟာသတွေပြောခိုင်းရမှာပဲ။ ဒါမှတစ်မနက်ခင်းလုံး နွမ်းလျ နေတဲ့စိတ်တွေက နည်းနည်းပြန်ကြည်လင်လာမှာ။
တစ်ကယ်လဲ သူမစိတ်တွေက တအားနွမ်းနယ်နေသည်မို့ ဟာသလေးတွေနှင့် အရင်ဆုံး ဖြေလျှော့ပြီးမှပဲ ကို့ကိုရင်ဖွင့်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဒီလိုတွေးလိုက်တော့သူမခြေလှမ်းတွေတက်ကြွလာသည်။ မှုန်မှိုင်းနေသည့်စိတ်တွေလည်း နည်းနည်းတော့ပြန်ကြည်လာသယောင်…။
ကို့အခန်းနားရောက်တော့ ဆရာဝင်မဝင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ဆရာရှိမနေမှန်းသေချာ တော့မှ ခေါင်းလေးပြူကာ ကို့ထိုင်ခုံနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
ထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောနေသည့် ကို့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအခိုက် ကို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူမကိုကြည့်လိုက်ပြီး ကို့ကိုတစ်စုံတစ်ခုလှမ်းပြောလိုက်သဖြင့် ကို့ရဲ့ မျက်နှာလေးဆန်းလဖက်လှည့်လာသည်။
ထိုင်နေရာမှ ဣနြေ္ဒရရနှင့် တစ်လှမ်းချင်းလျှောက်လာပုံကလည်း စတိုင်ကျလွန်းလှသည်။
“ဟိတ် မွန်း ဘာတွေငေးနေတာလဲ”
သူမရှေ့ရောက်ရောက်ချင်း မေးလိုက်တဲ့ကို့ရဲ့ပုံစံကြောင့် ရင်ထဲမှာနွေးထွေးသွားရသည်။
ကိုက သူမကို မွန်းဟုခေါ်သည်။ လဆိုသည့်သူမနာမည်ကို ဒီအတိုင်းအဖျားဆွတ်ခေါ် ရမှာရိုးသည်ဟုထင်သည်လားမပြောတတ်။
“အံမယ် ပိုပြီ။ လာမယ်ဆိုရင်လည်း ဘာလို့ဖုန်းမဆက်လဲ”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ ဟုတ်ပါပြီ။ အဲ………”
ခပ်ဝေးဝေးမှလာနေသည့်ဆရာ့ကိုမြင်တော့ ခုနကကို့အပြုံးတွေကတစ်ပိုင်းတစ်လက်စနှင့် ရပ်တန့်သွားသည်။
“အာ……ဆရာလာနေပြီ။ ကို အတန်းတက်ရတော့မယ်။ မွန်းလဲ အတန်းသွားတက်တော့ လေ”
“ကို ဒီဆရာ့အချိန်ကို အလွတ်ခံလို့မရဘူးကွ။ သူရှင်းပြတာဒီနေ့နားမထောင်လိုက်ရင် ကျန်တဲ့နေ့တွေ ဘာမှမသိတော့ဘူး”
“အင်းပါ။ ဒီဆရာ့တစ်ချိန်လေးတော့ ကိုခဏသင်လိုက်မယ်ကွာ။ ပြီးတော့မှ မွန်းပြောစရာ ရှိတာ ကို့ကိုပြောပေါ့”
“မွန်းရယ် ကိုလဲအဆင်မပြေလို့ပါ။ ပြောစရာရှိရင်နောက်မှပြောနော်။ ဟုတ်လား”
“ကိုမရဘူးကွာ။ ဒီနေ့အတန်းမတက်နဲ့ကွာ။ ကို…… ကို……”
သူမ ဘယ်လိုပဲတောင်းပန်တိုးလျှိုးပေမယ့် ကိုကသူမစကားနားမထောင်။ အတန်းထဲသို့ ပြေးဝင်သွားပြီး သူ့ထိုင်ခုံတွင်အကျအနသွားထိုင်သည်။
သူမတို့အဖြစ်အပျက်ကို တစ်စွန်းတစ်စမြင်လိုက်ရသော ကိုတို့အတန်းထဲက မိန်းကလေး တစ်ချို့ကတော့ ဆန်းလကိုကြည့်ပြီးမျက်ခုံးအတွန့်ချိုးကာ သရော်တော်တော်ပြုံးကြသည်။
ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ ရှက်ခြင်းတို့နှင့် သူမပူထူကာ ကိုနှင့်ဝေးရာသို့ သူမထွက် လာခဲ့သည်။ မျက်ရည်များကတော့ တတွေတွေစီးလျက်။
မနကျကတညျးက အိမျမှာတကျလိုကျသညျ့ပွဿနာဆိုတာကလညျးတောကျလြှောကျ…။ တဈမနကျခငျးလုံး လပျကီးမကောငျးခဲ့သညျမို့ ကြောငျးမှာရောတဈခုခုဖွဈမလား စိတျထဲထငျ့နမေိ၏။
သူမ စိတျညဈညူးစှာဖွငျ့ ခေါငျးကိုခါယမျးမိတော့
“ဟေး ဆနျးလ။ ခဏစောငျ့ပါဦး”
နောကျကချေါသံကွားသဖွငျ့ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ သူမသူငယျခငျြးနှဥေီး။
အနားသို့ရောကျလာသောနှဥေီးကလပေူတဈခကျြကိုမှုတျထုတျကာ အနညျးငယျမောဟိုကျ နသေောအသံဖွငျ့ ဆနျးလကိုပွောလိုကျသညျ။
နှဥေီးနှာသီးဖြားတှငျ ခြှေးစကျလေးတှသေီးနသေညျ။ နကေလညျးပူသညျကိုး။
နှဥေီးမကျြနှာကိုငေးစိုကျကွညျ့နသေော ဆနျးလမကျြလုံးမြားက နှဥေီးထုတျပွသောစာအုပျ လေးပျေါသို့ရောကျသှားသညျ။
ယခုလကျရှိနာမညျကွီးနသေော တကျသဈစကဗြာဆရာ”ရိုး”၏ ကဗြာစာအုပျ။
ပထမဆုံးထုတျရောငျးသညျ့၃ရကျအတှငျးမှာပငျ စာအုပျပွတျသှားသညျအထိ ပရိသတျမြား အားပေးခံခဲ့ရသောကဗြာစာအုပျ။
“ဟုတျပါ့ ဆနျးလရေ။ ၃ရကျအတှငျးမှာတငျ စာအုပျကုနျသှားလို့ ငါနဲ့နငျနဲ့တဈမွို့လုံးအနှံ့ ပတျရှာခဲ့တာလေ”
“အေးလေ အဲဒီတုနျးကမရခဲ့ဘူးလေ။ အခုစာအုပျက”
ဆနျးလဆီမှအမေးစကားကိုကွားတော့ နှဥေီးသူမမကျြလုံးအစုံကိုမှေးစငျးကာပွုံးလိုကျ၏။ အပွုံးက”ငါကှ”ဆိုသညျ့အပွုံး။
“ဒါက ဒုတိယအကွိမျဟ။ ငါနဲ့ခငျတဲ့စာအုပျဆိုငျကအဈမကွီးက ဒီစာအုပျရောကျတာနဲ့ ငါ့ဆီဖုနျးဆကျလို့ ကြောငျးထဲမရောကျခငျ စာအုပျဆိုငျထဲကဝငျဝယျလာတာ”
နှဥေီးစကားဆုံးတော့ ဆနျးလစာအုပျအဖုံးကို ကပြာကယာကွညျ့လိုကျသညျ။
စာအုပျအဖုံး၏ဘယျဖကျထောငျ့တှငျ ဒုတိယအကွိမျဆိုသညျ့ စာသားကအထငျးသား။
ကဗြာမကွိုကျသူမြားတောငျ လကျကမခခြငျြလောကျအောငျ ဆှဲဆောငျအားကောငျးလှနျး လှသော ကဗြာစာအုပျသညျ သူမတို့လိုကဗြာဝါသနာရှငျမြားအတှကျတော့ အလေးအမွတျပွုစရာ တနျဖိုးကွီးရတနာတဈခုဖွဈလာသညျ။
နောကျပွီး ကဗြာဆရာကိုယျတိုငျကိုက “ဒီစာအုပျဟာ ကြှနျတျော့ရဲ့နောကျဆုံးစာအုပျပါ” ဟုကွညောထားသညျမို့ ပရိသတျတှကေပိုစိတျဝငျစားနကွေသညျ။
“ဟဲ့…နှဥေီး ငါ့အတှကျရော ငါ့အတှကျဝယျလာခဲ့လား”
ဆနျးလတဈယောကျ ကလေးငယျသဖှယျ နှဥေီးကို အားတကျသရောမေးမိသညျ။
သို့သျော ပကျြယှငျးသှားသညျ့သူမမကျြနှာကို ခကျြခငျြးပွနျဖုံးလိုကျပွီး မထူးခွားသော လသေံဖွငျ့
“နငျ့အတှကျမပါခဲ့ဘူးဆနျးလရဲ့။ ငါတောငျဆိုငျရှငျအဈမခနျြထားပေးလို့ရတာ။ အားလုံးက လညျးဒီကဗြာစာအုပျကို အရူးအမူးဖွဈနကွေလို့ ဘှတျကငျလုပျထားတဲ့သူတှပေဲရတယျဆရာ။
ဒါပမေယျ့ နငျစိတျမပူပါနဲ့။ နောကျနှဈရကျလောကျဆိုရမယျတဲ့။ ဆိုငျရှငျအဈမက ထပျမှာ ထားတယျပွောတယျ”
နှဥေီးစကားကွောငျ့ အပွညျ့အဝဝမျးမသာနိုငျသျောလညျး ရငျထဲကအလုံးကွီးကတော့ကြ သှားသညျ။ ဘာပဲပွောပွော မရနိုငျတာထကျစာလှငျြတော့ တျောသေးသညျဟု ဆိုရမညျသာ။
သို့သျော သူလိုခငျြသော စာအုပျရသှားသဖွငျ့ ပွုံးပြျောနသေော နှဥေီးကိုစခငျြလာသဖွငျ့
“အေးလေ ဒါဆိုလဲပွီးတာပေါ့နှဥေီးရယျ။ ငါနောကျနှဈရကျနမှေဝယျမယျလေ။ လောလော ဆယျတော့ နငျ့စာအုပျငါယူသှားပွီဟေ့”
နှဥေီးလကျထဲပွနျရောကျနသေောစာအုပျကို ဆတျခနဲဆှဲလုကာ သူမပွေးလသေညျ။
ရုတျတရကျမို့ နှဥေီးလညျးအူကွောငျကွောငျဖွဈကာ ရပျကွညျ့နမေိသညျ။ နောကျတော့မှ သူမစာအုပျပါသှားမှနျးသိသဖွငျ့ ဆနျးလနောကျသို့ပွေးလိုကျသညျ။
အနောကျကနှဥေီးတဈယောကျ တဈကွျောကွျောအျောကာ ပွေးလိုကျလာသညျ။
နှဈယောကျလုံးကလညျး ခြောမောကွသူမြားမို့ ဘာဘီရုပျလေးနှဈရုပျ စိနျပွေးလိုကျတမျး ကစားနသေလိုပငျ။
အနောကျကပွေးလိုကျလာသော နှဥေီးကိုတဈခကျြလှညျ့ကွညျ့ပွီး ညာဖကျလမျးထဲအကှေ့ ထိုလမျးထဲမှထှကျလာသော စကျဘီးတဈစီးက ဆနျးလမကျြလုံးမြားကိုပွာဝသှေားစသေညျ။
စကျဘီးစီးသူကလကျကိုငျကိုကှလေို့ကျသျောလညျး စကျဘီးကိုယျထညျကတော့ဆနျးလကို အနညျးငယျပှတျမိသှားသညျ။
စကျဘီးအရှိနျကွောငျ့ သူမပုံလကျြသားလဲကသြှားပွီး တဈဖကျကစကျဘီးလညျး သူမ အနားမှာပငျမှောကျသှားသညျ။
ဆနျးလတဈယောကျ လဲကရြာမှလူးလဲထမိခြိနျတှငျ သူမလကျဖြံနရောကဆဈခနဲ နာသှား သဖွငျ့ကွညျ့မိတော့ ပှနျးသှားသညျ့ဒဏျရာလေးက သှေးစို့နသေညျကိုတှလေို့ကျရသညျ။
သို့သျော ဒဏျရာကိုဂရုမစိုကျအား။ ကဗြာစာအုပျကိုသာ ကမနျးကတနျးလိုကျရှာမိသညျ။
သူမပုံစံက အဖိုးတနျရတနာတဈခု ပြောကျဆုံးသှားသညျ့ ကလေးငယျတဈဦးသဖှယျ။
စာအုပျကစကျဘီးအောကျတှငျပိနပွေီး ပွုတျထှကျနသေောအဖုံးနှငျ့ စာအုပျအတှငျးသား တို့က တဈနရောဆီမှာ။
စာအုပျဖုံးကိုဘယျလကျကကိုငျ စာအုပျအတှငျးသားကိုညာလကျကကိုငျကာ သူမငူငူကွီး ရပျနမေိသညျ။
ပွေးလာသောခွလှေမျးတဈစုံက ဆနျးလဘေးတှငျရပျသှားသဖွငျ့ နောကျကိုလှညျ့ကွညျ့ လိုကျတော့ နှဥေီး။
စာအုပျကိုတဈလှညျ့ သူမကိုတဈလှညျ့ကွညျ့နသေညျ။ သူမမကျြလုံးတှကေ နှမွောတသ နဟေနျ။
နှဥေီးလသေံကတငျးမာလှနျးလှသလို သူမမကျြလုံးနှဈလုံးကလညျး ဒေါသအရောငျမြား တဖိတျဖိတျတောကျနသေညျမှာ လူကိုစားတော့မညျ့ ကြားသဈမလေးတဈကောငျသဖှယျ။
“ငါပွနျဝယျပေးပါ့မယျဟာ။ နောကျနှဈရကျလောကျဆို စာအုပျဆိုငျကို စာအုပျရောကျပွီ မဟုတျလား။ ငါအစားပွနျဝယျပေးပါ့မယျနျော”
ဆနျးလ နှဥေီးကိုအနူးအညှတျတောငျးပနျနပေမေယျ့ နှဥေီး၏တငျးမာနသေညျ့မကျြနှာ ထားကတော့ ပြော့ပွောငျးမသှားခဲ့။
ထိုအခိုကျ တငျးတငျးစထေ့ားသော နှဥေီးနှုတျခမျးတဈစုံကပှငျ့ဟလာပွီး “ဒီစာအုပျက အစားပွနျဝယျပေးလို့မရတဲ့စာအုပျပဲဆနျးလ” ဆိုသညျ့စကားနှငျ့အတူ ကြောခိုငျးလှညျ့ထှကျသှားသော မွငျကှငျးတို့က ဆနျးလအတှကျတော့တုနျလှုပျဖှယျပငျ။
ဆနျးလ ကြောကျရုပျတဈရုပျလိုငိုငျသှားကာ မကျြရညျတို့ကအဆီးအတားမဲ့စှာကလြာ၏။
စကျဘီးသမားက “အဈမဘာဖွဈသှားလဲ”ဆိုသညျ့စကားကိုတောငျ သူမအရေးမစိုကျနိုငျ။
သူမခဈြရသညျ့သူငယျခငျြးကိုလညျး နာကငျြအောငျ၊ ဝမျးနညျးအောငျ၊ ပငျပနျးအောငျ သူမလုပျခဲ့မိပွနျပွီ။
သို့သျော နှဥေီးပွောသှားသညျ့ စကားတဈခှနျးကိုတော့ သူမနားမလညျ။
ထိုအတှေးမြားအားလုံး အဖုံးပွုတျသှားသညျ့ စာအုပျအတှငျးသားလေးကိုကွညျ့မိတော့မှ ရှငျးသှားခဲ့သညျ။
“ရိုး”ဟုရေးထားသညျ့ လကျမှတျလှလှလေးက စာအုပျပျေါတှငျခံ့ထညျစှာ။
အဈမကရော၊ အမကေရော နောကျပွီး အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးကပါ လဈြလြူရှုခံလိုကျရ သညျ့ဘဝမို့ နောကျဆုံးအားပွုစရာသညျ ခဈြသူတဈယောကျသာရှိတော့သညျ။
ကို့ဆီရောကျလှငျြ ကို့ရငျခှငျထဲတိုးခှကေ့ာ အားပါးတရငိုမညျ။ ကို့ပေါငျပျေါခေါငျးအုံးကာ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျမညျ။ ကိုပေးမညျ့အနမျးမြားနှငျ့ သူမစိတျညဈညူးမှုတှကေို ဖွဖြေောကျပဈမညျ။
သွျော…မတေ့ော့မလို့။ အရငျဆုံးဟာသတှပွေောခိုငျးရမှာပဲ။ ဒါမှတဈမနကျခငျးလုံး နှမျးလြ နတေဲ့စိတျတှကေ နညျးနညျးပွနျကွညျလငျလာမှာ။
တဈကယျလဲ သူမစိတျတှကေ တအားနှမျးနယျနသေညျမို့ ဟာသလေးတှနှေငျ့ အရငျဆုံး ဖွလြှေော့ပွီးမှပဲ ကို့ကိုရငျဖှငျ့တော့မညျဟု ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။
ဒီလိုတှေးလိုကျတော့သူမခွလှေမျးတှတေကျကွှလာသညျ။ မှုနျမှိုငျးနသေညျ့စိတျတှလေညျး နညျးနညျးတော့ပွနျကွညျလာသယောငျ…။
ကို့အခနျးနားရောကျတော့ ဆရာဝငျမဝငျတဈခကျြကွညျ့လိုကျပွီး ဆရာရှိမနမှေနျးသခြော တော့မှ ခေါငျးလေးပွူကာ ကို့ထိုငျခုံနရောကိုလှမျးကွညျ့လိုကျသညျ။
ထုံးစံအတိုငျး သူငယျခငျြးမြားနှငျ့စကားပွောနသေညျ့ ကို့ကိုတှလေို့ကျရသညျ။ ထိုအခိုကျ ကို့သူငယျခငျြးတဈယောကျက သူမကိုကွညျ့လိုကျပွီး ကို့ကိုတဈစုံတဈခုလှမျးပွောလိုကျသဖွငျ့ ကို့ရဲ့ မကျြနှာလေးဆနျးလဖကျလှညျ့လာသညျ။
ထိုငျနရောမှ ဣနွေ်ဒရရနှငျ့ တဈလှမျးခငျြးလြှောကျလာပုံကလညျး စတိုငျကလြှနျးလှသညျ။
“ဟိတျ မှနျး ဘာတှငေေးနတောလဲ”
သူမရှရေ့ောကျရောကျခငျြး မေးလိုကျတဲ့ကို့ရဲ့ပုံစံကွောငျ့ ရငျထဲမှာနှေးထှေးသှားရသညျ။
ကိုက သူမကို မှနျးဟုချေါသညျ။ လဆိုသညျ့သူမနာမညျကို ဒီအတိုငျးအဖြားဆှတျချေါ ရမှာရိုးသညျဟုထငျသညျလားမပွောတတျ။
“အံမယျ ပိုပွီ။ လာမယျဆိုရငျလညျး ဘာလို့ဖုနျးမဆကျလဲ”
“ဟုတျပါပွီဗြာ။ ဟုတျပါပွီ။ အဲ………”
ခပျဝေးဝေးမှလာနသေညျ့ဆရာ့ကိုမွငျတော့ ခုနကကို့အပွုံးတှကေတဈပိုငျးတဈလကျစနှငျ့ ရပျတနျ့သှားသညျ။
“အာ……ဆရာလာနပွေီ။ ကို အတနျးတကျရတော့မယျ။ မှနျးလဲ အတနျးသှားတကျတော့ လေ”
“ကို ဒီဆရာ့အခြိနျကို အလှတျခံလို့မရဘူးကှ။ သူရှငျးပွတာဒီနနေ့ားမထောငျလိုကျရငျ ကနျြတဲ့နတှေ့ေ ဘာမှမသိတော့ဘူး”
“အငျးပါ။ ဒီဆရာ့တဈခြိနျလေးတော့ ကိုခဏသငျလိုကျမယျကှာ။ ပွီးတော့မှ မှနျးပွောစရာ ရှိတာ ကို့ကိုပွောပေါ့”
“မှနျးရယျ ကိုလဲအဆငျမပွလေို့ပါ။ ပွောစရာရှိရငျနောကျမှပွောနျော။ ဟုတျလား”
“ကိုမရဘူးကှာ။ ဒီနအေ့တနျးမတကျနဲ့ကှာ။ ကို…… ကို……”
သူမ ဘယျလိုပဲတောငျးပနျတိုးလြှိုးပမေယျ့ ကိုကသူမစကားနားမထောငျ။ အတနျးထဲသို့ ပွေးဝငျသှားပွီး သူ့ထိုငျခုံတှငျအကအြနသှားထိုငျသညျ။
သူမတို့အဖွဈအပကျြကို တဈစှနျးတဈစမွငျလိုကျရသော ကိုတို့အတနျးထဲက မိနျးကလေး တဈခြို့ကတော့ ဆနျးလကိုကွညျ့ပွီးမကျြခုံးအတှနျ့ခြိုးကာ သရျောတျောတျောပွုံးကွသညျ။
ဝမျးနညျးခွငျး၊ အထီးကနျြခွငျး၊ ရှကျခွငျးတို့နှငျ့ သူမပူထူကာ ကိုနှငျ့ဝေးရာသို့ သူမထှကျ လာခဲ့သညျ။ မကျြရညျမြားကတော့ တတှတှေစေီးလကျြ။
This entry was posted in အခန်းဆက်ဝတ္ထု on October 30, 2015 by linyeikhtin.
မျက်နှာသစ်ပြီးပြီးချင်း မမအိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်လာသဖြင့် သူမနားရွက်ဖျားကနားဆွဲလေးဆီ ဆန်းလအကြည့်ရောက်သွားသည်။
မမလမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း စည်းချက်ညီညီလှုပ်ယမ်းနေသော လခြမ်းပုံသဏ္ဍာန်ဆွဲသီး လေးက သူမစိတ်ကိုဖမ်းစားလိုက်၏။
မိန်းကလေးပီပီ ခရေးခရာအလှအပပစ္ဖည်းလေးတွေကို မက်မောတတ်သည့်အလျောက် ထိုဆွဲသီးလေးအကြောင်း သူမသိချင်လာသည်။
“မမ အဲဒါလေးဘယ်လောက်လဲ။ ဘယ်ကဝယ်တာလဲဟင်။ ညီမလေးကို ခဏငှားပါလား”
“အာ………မငှားနိုင်ပါဘူး။ ငါတောင် ကြိုက်လွန်းလို့မနေ့ကမှ ၂၀၀၀၀ပေးပြီးဝယ်လာတာ”
“ဒါဖြင့်လည်း မမပိုက်ဆံတစ်ဝက်ခဏစိုက်ပြီးဝယ်ပေးပါလား။ ညီမလေးမှာ ကျောင်းလခ သွင်းရမယ့်ပိုက်ဆံပဲကျန်တော့လို့”
“ဆန်းလ ငါ့မှာလည်းပိုက်ဆံသိပ်မပိုဘူး။ နင်ပိုက်ဆံအပြည့်ပေးပြီး ငါ့ကိုဝယ်ခိုင်းရင်လည်း ငါခုတလောလမ်းမကြုံဘူး”
“မမဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ဒါလေးပြောတာနဲ့တော့ စိတ်ဆိုးစရာမလိုဘူးထင်တာပဲ”
မမမျက်နှာသူမဖက်လှည့်လာသည်။ အသားဖြူသူမို့ ဒေါသထွက်သည့်အခါ မျက်နှာကနီရဲ နေသည်။
ဖေဖေပေးခဲ့တဲ့ ဝက်ဝံရုပ်အဖြူလေး နင့်ကော်ဖီတွေစွန်းကုန်တာ အခုဘယ်လိုမှ ပြန်ပြီး ချွတ်လို့မရတော့ဘူးလေ”
“ဘာမတော်တဆလဲ။ ဆောရီးပြောရုံနဲ့ ဖေဖေ့အရုပ်က ပြန်ကောင်းသွားမှာလား။ ငါ့မှာ အဖေ့ကိုလွမ်းတိုင်း အဲဒီအရုပ်လေးကိုပဲကြည့်နေရတာလေ”
မမအသံကအိပ်ခန်းထဲတွင် ဟိန်းထွက်နေသလောက် ဆန်းလတစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ့်အပြစ်နှင့်ကိုယ်မို့ ခေါင်းငုံ့နေရုံသာ။ အိပ်ခန်းကလည်းအသံအရမ်းလုံလွန်းသည်မို့ မမအသံက ဟိန်းသင့်သည်ထက်ကိုပိုဟိန်းနေ၏။
“အခုဝက်ဝံရုပ်က ငါတန်ဖိုးအထားဆုံးပစ္စည်း၊ ငါ့ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံးပစ္စည်း။ ဒါကိုမှ နင်ကဖျက်ဆီးလိုက်တာ။
ဒီတော့ဆန်းလ နောက်ဆိုငါ့ပစ္စည်းတွေလာမထိနဲ့။ အထူးသဖြင့် အဖေပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်း တွေနဲ့ ငါသဘောအကျဆုံးပစ္စည်းတွေကို နင်လာမထိပါနဲ့။
ဖေဖေ့အမှတ်တရပစ္စည်း သူမကြောင့်ပျက်ဆီးသွားတာမှန်သော်လည်း တမင်ရည်ရွယ် ပြီးလုပ်ခြင်းမဟုတ်။ နောက်ပြီး သူမလုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်။
ထိုနေ့က အခန်းကိုဆန်းလသန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း သူမသောက်နေကျ ကော်ဖီခွက်က လက်ထဲပါလာသည်။
မမကုတင်ကိုရှင်းပေးရန် လက်ထဲကကော်ဖီခွက်ကို မမစာရေးခုံပေါ်တွင် အဖုံးပိတ်ပြီး တင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မွှေ့ယာကိုခါသည်။
ထိုအခိုက် ဆန်းလအချစ်တော်ကြောင်မလေးက သူ့သခင်မနောက်ကိုလိုက်လာသည်။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်း စားပွဲခုံပေါ်ခုန်တက်လိုက်တော့ သူမကိုယ်ကစားပွဲပေါ်ရှိ ကော်ဖီခွက်ကိုတိုက် မိကာ ကော်ဖီများဖိတ်စင်ကုန်၏။
ခွမ်းဆိုသည့်အသံကြား၍ သူမလှည့်ကြည့်လိုက်သော်လည်း နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ ကော်ဖီ များက စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသည့် စာအုပ်များနှင့်ဝက်ဝံရုပ်အဖြူလေးပေါ်တွင် ရွှဲရွှဲစိုနေသည်။
ဝက်ဝံရုပ်လေးကော်ဖီစွန်းသွားတာသိသိချင်း သူမလျှော်ပါသေးသည်။ အရုပ်အရောင်က အဖြူစွတ်စွတ်မို့ ဘယ်လိုမှမပြောင်။
မမပြန်လာတော့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို မမကိုပြောပြခဲ့ပေမယ့် မမသူမကိုဘာတစ်ခွန်းမှ ခွန်းတုံ့မပြန်။ မမအကျင့်က စိတ်အရမ်းဆိုးပြီဆို ဘာစကားမှမပြောတော့ပဲ ငြိမ်သက်သွားတတ်သည်။
ထို့ကြောင့် သူမကလည်းအလိုက်သိစွာပင် ဘာမှဆက်မပြောပဲဆိတ်ဆိတ်နေလိုက်သည်။ ဒီနေ့တော့ စိတ်ဆိုးပြေမလားဆိုပြီး စကားစကြည့်ပေမယ့် သူမအတွေးကတက်တက်စင်အောင်လွဲခဲ့၏။
အေးစက်စိမ်းကားသည့်စကားများက ဆန်းလရင်ကိုခွဲလိုက်သည့်နှယ် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ပူထူလာပြီး သူမမျက်လုံးတွေဝေဝါးလာသည်။
မမတံခါးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းပိတ်ပြီး အခန်းအပြင်ထွက်သွားတော့မှ ဆန်းလ အိခနဲရှိုက်ငိုချ လိုက်သည်။
ဒီမနက် မမကိုစိတ်ကောက်ပြီး အမေ့ကိုသူမချွဲနေသည်။
အမေ့ကိုချွဲနေသည်သာဆိုရသည် ဂဏန်းပေါင်းစက်ကို တစ်ဒေါက်ဒေါက်ခေါက်နေသည့် အမေ့ပေါင်ပေါ်ခေါင်းတင်ပြီး အိပ်နေတာအပြင်မပို။ အမေဖြစ်သူကလည်း သမီးလေး၊ဘာလေးနှင့် စကာားမပြော။ ဆံပင်လေးမသပ်။ ယုတ်စွအဆုံး သူမပေါင်ပေါ်အိပ်နေတာတောင် သိရဲ့လားမသိ။
သို့သော် ဒါကိုပင် အမေနှင့်သူမတို့ကြား တွတ်တီးတွတ်တာကျီစယ်သည့် အခိုက်အတန့် ကာလဟု သူမတို့မှတ်ယူထားကြသည်။
အမေကပြတ်သားသည်။ စိတ်ဆတ်သည်။ တွေဝေခြင်းမရှိ။ ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်သည်။ ပြောရလျှင် သူများမိခင်တွေလိုမျိုးမငြင်သာ။
ဒါကလည်း အမေ့အပြစ်တော့မဟုတ်။ အဖေက မမ၂တန်းနှစ်၊ သူမ၁တန်းနှစ်ကတည်းက ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။ အမေကသူဌေးသမီးဆိုပေမယ့် အမေ့မိဘများက သူတို့သဘောမတူသူနောက် လိုက်သွားသဖြင့် အမွေပြတ်ဟုဆိုကာ ယနေ့တိုင်မဆက်သွယ်။ အဖေ့ကလည်းဆင်းရဲသူမို့ ပစ္စည်း ဥစ္စာဆိုလို့ ယခုလက်ရှိ အိမ်ကလေးတစ်လုံးသာကျန်ခဲ့သည်။
ထိုကတည်းကအမေ့ခမျာ တစ်မိသားစုလုံး၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် အခြားယောက်ျား များနှင့် တန်းတူရင်ပေါင်တန်းပြီး ပိုက်ဆံရှာခဲ့ရသည်။ လောကဓံ၏ ရိုက်ပုတ်ချက်အောက်တွင် အမေ့ ခမျာ မိန်းမသားခန္ဓာကိုယ်နှင့် ယောက်ျားစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူများမိခင်တွေလို ငြင်သာယုယမိချင်ခဲ့ လျှင်တောင် အမေ့တွင်အချိန်မရခဲ့။
ဘာပဲပြောပြော အမေ့ကြိုးစားမှုအောက်တွင် သူမတို့ညီအစ်မ စားဝတ်နေရေးအတွက်တို့ ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်တို့ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုခဲ့။ ကုန်ကုန်ပြောရလျှင် မမကနောက်ဆုံးနှစ် သူမက တတိယနှစ်ရောက်လာသည့်တိုင် အလုပ်ထွက်မလုပ်ခဲ့ရ။
“ညည်းထတော့အေ။ ငါနာလှပြီ။ နင်ခေါင်းကအရမ်းလေးတယ်”
သူမအိပ်တာ ၁၀မိနစ်လောက်ပဲကြာသေးပေမယ့် အမေသူမကိုထခိုင်းလေသည်။
အမေ့စကားကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူမဖြစ်လိုသည့်ဆန္ဒကို မဝံ့မရဲပြောမိသည်။
“အို…ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်အေ…။ တစ်ရက်တစ်လေလေး ကျောင်းနောက်ကျမှသွားပါတယ်။ သူ့ခေါင်းအလေးကြီး ငါ့ပေါင်ပေါ်လာအိပ်ရတာနဲ့၊ ခေါင်းဖြီးခိုင်းရတာနဲ့ အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲ”
“အမေကလည်း သမီးသူငယ်ချင်းအမေတွေဆို သမီးသူငယ်ချင်းတွေကိုခေါင်းတွေဖြီးပေး ဆံပင်လေးတွေရှင်းပေးလုပ်ပေးကြ……”
“တစ်ခြားအမေတွေဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့။ တစ်ခြားအမေတွေ ငါ့လိုစီးပွားရှာသလား။ ငါ့လို ပိုက်ဆံရှာသလား။
ငါအလုပ်ရှုပ်နေလို့ စိတ်မတိုချင်ပါဘူးဆိုမှ နင်ကငါ့ဒေါသကိုလာဆွနေတယ်။
သွားတော့ဆန်းလရယ်။ နင့်ကိုငါဆက်မမြင်ချင်ဘူး။ ဆက်မြင်နေရရင်သွေးတက်တယ်။”
အမေရယ်ပြောရက်လိုက်တာ။ တစ်ခါတစ်လေလေး ကိုယ့်အမေနဲ့ယုယုယယနေချင်တာ သမီးမှားသွားလားဟင်။ အမေ အလုပ်ရှုပ်နေမှန်းသိပေမယ့် တစ်ကယ်လို့များဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ မေးကြည့်မိတာပါ။
ဝေ့ဝဲတက်လာသောမျက်ရည်စများကို သူမမျက်တောင်လေးဖြင့်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ရင်း အမေ့ရှေ့မှထွက်လာခဲ့သည်။
မကျြနှာသဈပွီးပွီးခငျြး မမအိပျခနျးထဲပွနျဝငျလာသဖွငျ့ သူမနားရှကျဖြားကနားဆှဲလေးဆီ ဆနျးလအကွညျ့ရောကျသှားသညျ။
မမလမျးလြှောကျလိုကျတိုငျး စညျးခကျြညီညီလှုပျယမျးနသေော လခွမျးပုံသဏ်ဍာနျဆှဲသီး လေးက သူမစိတျကိုဖမျးစားလိုကျ၏။
မိနျးကလေးပီပီ ခရေးခရာအလှအပပစ်ဖညျးလေးတှကေို မကျမောတတျသညျ့အလြောကျ ထိုဆှဲသီးလေးအကွောငျး သူမသိခငျြလာသညျ။
“မမ အဲဒါလေးဘယျလောကျလဲ။ ဘယျကဝယျတာလဲဟငျ။ ညီမလေးကို ခဏငှားပါလား”
“အာ………မငှားနိုငျပါဘူး။ ငါတောငျ ကွိုကျလှနျးလို့မနကေ့မှ ၂၀၀၀၀ပေးပွီးဝယျလာတာ”
“ဒါဖွငျ့လညျး မမပိုကျဆံတဈဝကျခဏစိုကျပွီးဝယျပေးပါလား။ ညီမလေးမှာ ကြောငျးလခ သှငျးရမယျ့ပိုကျဆံပဲကနျြတော့လို့”
“ဆနျးလ ငါ့မှာလညျးပိုကျဆံသိပျမပိုဘူး။ နငျပိုကျဆံအပွညျ့ပေးပွီး ငါ့ကိုဝယျခိုငျးရငျလညျး ငါခုတလောလမျးမကွုံဘူး”
“မမဘာဖွဈနတောလဲ။ ဒါလေးပွောတာနဲ့တော့ စိတျဆိုးစရာမလိုဘူးထငျတာပဲ”
မမမကျြနှာသူမဖကျလှညျ့လာသညျ။ အသားဖွူသူမို့ ဒေါသထှကျသညျ့အခါ မကျြနှာကနီရဲ နသေညျ။
ဖဖေပေေးခဲ့တဲ့ ဝကျဝံရုပျအဖွူလေး နငျ့ကျောဖီတှစှေနျးကုနျတာ အခုဘယျလိုမှ ပွနျပွီး ခြှတျလို့မရတော့ဘူးလေ”
“ဘာမတျောတဆလဲ။ ဆောရီးပွောရုံနဲ့ ဖဖေအေ့ရုပျက ပွနျကောငျးသှားမှာလား။ ငါ့မှာ အဖကေို့လှမျးတိုငျး အဲဒီအရုပျလေးကိုပဲကွညျ့နရေတာလေ”
မမအသံကအိပျခနျးထဲတှငျ ဟိနျးထှကျနသေလောကျ ဆနျးလတဈယောကျကတော့ ကိုယျ့အပွဈနှငျ့ကိုယျမို့ ခေါငျးငုံ့နရေုံသာ။ အိပျခနျးကလညျးအသံအရမျးလုံလှနျးသညျမို့ မမအသံက ဟိနျးသငျ့သညျထကျကိုပိုဟိနျးနေ၏။
“အခုဝကျဝံရုပျက ငါတနျဖိုးအထားဆုံးပစ်စညျး၊ ငါ့ဘဝရဲ့အရေးအကွီးဆုံးပစ်စညျး။ ဒါကိုမှ နငျကဖကျြဆီးလိုကျတာ။
ဒီတော့ဆနျးလ နောကျဆိုငါ့ပစ်စညျးတှလောမထိနဲ့။ အထူးသဖွငျ့ အဖပေေးခဲ့တဲ့ပစ်စညျး တှနေဲ့ ငါသဘောအကဆြုံးပစ်စညျးတှကေို နငျလာမထိပါနဲ့။
ဖဖေအေ့မှတျတရပစ်စညျး သူမကွောငျ့ပကျြဆီးသှားတာမှနျသျောလညျး တမငျရညျရှယျ ပွီးလုပျခွငျးမဟုတျ။ နောကျပွီး သူမလုပျခဲ့တာလညျးမဟုတျ။
ထိုနကေ့ အခနျးကိုဆနျးလသနျ့ရှငျးရေးလုပျသညျ။ ထုံးစံအတိုငျး သူမသောကျနကြေ ကျောဖီခှကျက လကျထဲပါလာသညျ။
မမကုတငျကိုရှငျးပေးရနျ လကျထဲကကျောဖီခှကျကို မမစာရေးခုံပျေါတှငျ အဖုံးပိတျပွီး တငျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ မှယေ့ာကိုခါသညျ။
ထိုအခိုကျ ဆနျးလအခဈြတျောကွောငျမလေးက သူ့သခငျမနောကျကိုလိုကျလာသညျ။ ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့လုပျရငျး စားပှဲခုံပျေါခုနျတကျလိုကျတော့ သူမကိုယျကစားပှဲပျေါရှိ ကျောဖီခှကျကိုတိုကျ မိကာ ကျောဖီမြားဖိတျစငျကုနျ၏။
ခှမျးဆိုသညျ့အသံကွား၍ သူမလှညျ့ကွညျ့လိုကျသျောလညျး နောကျကသြှားခဲ့ပွီ။ ကျောဖီ မြားက စားပှဲပျေါတှငျတငျထားသညျ့ စာအုပျမြားနှငျ့ဝကျဝံရုပျအဖွူလေးပျေါတှငျ ရှဲရှဲစိုနသေညျ။
ဝကျဝံရုပျလေးကျောဖီစှနျးသှားတာသိသိခငျြး သူမလြှျောပါသေးသညျ။ အရုပျအရောငျက အဖွူစှတျစှတျမို့ ဘယျလိုမှမပွောငျ။
မမပွနျလာတော့ ဖွဈကွောငျးကုနျစငျကို မမကိုပွောပွခဲ့ပမေယျ့ မမသူမကိုဘာတဈခှနျးမှ ခှနျးတုံ့မပွနျ။ မမအကငျြ့က စိတျအရမျးဆိုးပွီဆို ဘာစကားမှမပွောတော့ပဲ ငွိမျသကျသှားတတျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ သူမကလညျးအလိုကျသိစှာပငျ ဘာမှဆကျမပွောပဲဆိတျဆိတျနလေိုကျသညျ။ ဒီနတေ့ော့ စိတျဆိုးပွမေလားဆိုပွီး စကားစကွညျ့ပမေယျ့ သူမအတှေးကတကျတကျစငျအောငျလှဲခဲ့၏။
အေးစကျစိမျးကားသညျ့စကားမြားက ဆနျးလရငျကိုခှဲလိုကျသညျ့နှယျ ရငျဘတျတဈခုလုံး ပူထူလာပွီး သူမမကျြလုံးတှဝေဝေါးလာသညျ။
မမတံခါးကိုခပျကွမျးကွမျးပိတျပွီး အခနျးအပွငျထှကျသှားတော့မှ ဆနျးလ အိခနဲရှိုကျငိုခြ လိုကျသညျ။
ဒီမနကျ မမကိုစိတျကောကျပွီး အမကေို့သူမခြှဲနသေညျ။
အမကေို့ခြှဲနသေညျသာဆိုရသညျ ဂဏနျးပေါငျးစကျကို တဈဒေါကျဒေါကျခေါကျနသေညျ့ အမပေ့ေါငျပျေါခေါငျးတငျပွီး အိပျနတောအပွငျမပို။ အမဖွေဈသူကလညျး သမီးလေး၊ဘာလေးနှငျ့ စကာားမပွော။ ဆံပငျလေးမသပျ။ ယုတျစှအဆုံး သူမပေါငျပျေါအိပျနတောတောငျ သိရဲ့လားမသိ။
သို့သျော ဒါကိုပငျ အမနှေငျ့သူမတို့ကွား တှတျတီးတှတျတာကြီစယျသညျ့ အခိုကျအတနျ့ ကာလဟု သူမတို့မှတျယူထားကွသညျ။
အမကေပွတျသားသညျ။ စိတျဆတျသညျ။ တှဝေခွေငျးမရှိ။ ဘှငျးဘှငျးပွောတတျသညျ။ ပွောရလှငျြ သူမြားမိခငျတှလေိုမြိုးမငွငျသာ။
ဒါကလညျး အမအေ့ပွဈတော့မဟုတျ။ အဖကေ မမ၂တနျးနှဈ၊ သူမ၁တနျးနှဈကတညျးက ဆုံးပါးသှားခဲ့သညျ။ အမကေသူဌေးသမီးဆိုပမေယျ့ အမမေိ့ဘမြားက သူတို့သဘောမတူသူနောကျ လိုကျသှားသဖွငျ့ အမှပွေတျဟုဆိုကာ ယနတေို့ငျမဆကျသှယျ။ အဖကေ့လညျးဆငျးရဲသူမို့ ပစ်စညျး ဥစ်စာဆိုလို့ ယခုလကျရှိ အိမျကလေးတဈလုံးသာကနျြခဲ့သညျ။
ထိုကတညျးကအမခေ့မြာ တဈမိသားစုလုံး၏ စားဝတျနရေေးအတှကျ အခွားယောကျြား မြားနှငျ့ တနျးတူရငျပေါငျတနျးပွီး ပိုကျဆံရှာခဲ့ရသညျ။ လောကဓံ၏ ရိုကျပုတျခကျြအောကျတှငျ အမေ့ ခမြာ မိနျးမသားခန်ဓာကိုယျနှငျ့ ယောကျြားစိတျဖွဈခဲ့ရသညျ။ သူမြားမိခငျတှလေို ငွငျသာယုယမိခငျြခဲ့ လှငျြတောငျ အမတှေ့ငျအခြိနျမရခဲ့။
ဘာပဲပွောပွော အမကွေို့းစားမှုအောကျတှငျ သူမတို့ညီအဈမ စားဝတျနရေေးအတှကျတို့ ကြောငျးတကျဖို့အတှကျတို့ ဘာမှစိတျပူစရာမလိုခဲ့။ ကုနျကုနျပွောရလှငျြ မမကနောကျဆုံးနှဈ သူမက တတိယနှဈရောကျလာသညျ့တိုငျ အလုပျထှကျမလုပျခဲ့ရ။
“ညညျးထတော့အေ။ ငါနာလှပွီ။ နငျခေါငျးကအရမျးလေးတယျ”
သူမအိပျတာ ၁၀မိနဈလောကျပဲကွာသေးပမေယျ့ အမသေူမကိုထခိုငျးလသေညျ။
အမစေ့ကားကို မကွားခငျြယောငျဆောငျပွီး သူမဖွဈလိုသညျ့ဆန်ဒကို မဝံ့မရဲပွောမိသညျ။
“အို…ရှုပျရှုပျရှကျရှကျအေ…။ တဈရကျတဈလလေေး ကြောငျးနောကျကမြှသှားပါတယျ။ သူ့ခေါငျးအလေးကွီး ငါ့ပေါငျပျေါလာအိပျရတာနဲ့၊ ခေါငျးဖွီးခိုငျးရတာနဲ့ အလုပျကိုရှုပျနတောပဲ”
“အမကေလညျး သမီးသူငယျခငျြးအမတှေဆေို သမီးသူငယျခငျြးတှကေိုခေါငျးတှဖွေီးပေး ဆံပငျလေးတှရှေငျးပေးလုပျပေးကွ……”
“တဈခွားအမတှေဆေိုတဲ့စကားမပွောနဲ့။ တဈခွားအမတှေေ ငါ့လိုစီးပှားရှာသလား။ ငါ့လို ပိုကျဆံရှာသလား။
ငါအလုပျရှုပျနလေို့ စိတျမတိုခငျြပါဘူးဆိုမှ နငျကငါ့ဒေါသကိုလာဆှနတေယျ။
သှားတော့ဆနျးလရယျ။ နငျ့ကိုငါဆကျမမွငျခငျြဘူး။ ဆကျမွငျနရေရငျသှေးတကျတယျ။”
အမရေယျပွောရကျလိုကျတာ။ တဈခါတဈလလေေး ကိုယျ့အမနေဲ့ယုယုယယနခေငျြတာ သမီးမှားသှားလားဟငျ။ အမေ အလုပျရှုပျနမှေနျးသိပမေယျ့ တဈကယျလို့မြားဆိုတဲ့အတှေးလေးနဲ့ မေးကွညျ့မိတာပါ။
ဝဝေဲ့တကျလာသောမကျြရညျစမြားကို သူမမကျြတောငျလေးဖွငျ့ပုတျခတျပုတျခတျလုပျရငျး အမရှေ့မှေ့ထှကျလာခဲ့သညျ။
This entry was posted in အခန်းဆက်ဝတ္ထု on October 29, 2015 by linyeikhtin.
ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးအရောင်တွေက အမည်းရယ်၊ အညိုရယ်၊ အဖြူရယ်၊ အစိမ်းရယ်၊ နောက်ပြီး အပြာရယ်။
တိုက်ဆိုင်တာပဲလားတော့မသိပါဘူး။ ကျွန်မအချစ်ဆုံးသူတွေကလည်း ၅ယောက်ရှိတယ်။
(ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးကနေစပြောမယ်) သူတို့တွေက မမ၊ သူငယ်ချင်းမလေးနွေဦး၊ ကိုကို၊ မေမေနဲ့ …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………။
အချစ်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ အသေသတ်…။
အင်း…ကလေးဘဝထဲက ကစားလာတဲ့ကစားနည်းဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ စက္ကူရုပ် ချိုးတာ။ အဲဒီစက္ကူရုပ်ချိုးတာထဲကမှ ကြိုးကြာရုပ်လေးချိုးရတာအကြိုက်ဆုံးပဲ။
လွတ်မြောက်ရာနေရာတစ်ခုဆီ အတောင်ဖြန့်ပြီးပျံသန်းနေတဲ့ပုံလေးလေ။ ဘယ်လောက် လွတ်လပ်ပြီး ဘယ်လောက်ပေါ့ပါးလိုက်သလဲ။
ဟုတ်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ။
အဲ…။ ဒါပေမယ့် ၄ကကံကောင်းတယ် သူ့ဖက်လှည့်ပြီး အားပေးစကားပြောမယ့်၅ရှိတယ်။ ၃ကတော့ကံဆိုးတယ်။ ၂ဆိုတဲ့တစ်ယောက်က သူ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလေ။
ဟွန်း… အဲဒီ၂က မုန်းစရာကြီး။
သူမရှေ့သို့ သူမရဲ့ဆေးစာအုပ်လေးရောက်လာသဖြင့် ဒေါက်တာ့ကိုမော့ကြည့်မိတော့ ဒေါက်တာကဖခင်တစ်ယောက်လိုပြုံးပြသည်။
“သမီးကဆရာ့လူနာဖြစ်တာမကြာသေးပေမယ့် သမီးအကြောင်းဆရာသိပါတယ်။ သမီးက အားငယ်လွယ်တာကိုး။ ဒီမှာကြည့်စမ်းသမီး။ လောကမှာ ဘယ်သူမှတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကွ။ သမီးက ငါကတော့စည်းအပြင်ရောက်နေပြီလို့ထင်ရင် သမီးစည်းအပြင်ရောက်သွားပြီ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ငါ့အပေါ်နွေးထွေးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင် သမီးပတ်ဝန်းကျင်က သမီးကို နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံကြလိမ့်မယ်”
ဆရာ့ဆီကဒီလိုစကားတွေကြားရတော့ သူမအားတက်မိသည်။ မှိုင်းညှို့နေသည့်မျက်ဝန်း တွေက ခုမှတဖျတ်ဖျတ်လက်လာသည်။
“ဒါဆိုဆရာ သမီးရဲ့ရောဂါက ကုလို့ပျောက်တယ်ပေါ့နော်”
“ဒါပေါ့သမီးရဲ့။ ဆရာပေးတဲ့ဆေးလေးတွေကို မှန်မှန်သောက်မယ်။ ဆရာ့စကားတွေကို လိုက်နာမယ်ဆိုရင် သမီးရဲ့စိတ်ကျရောဂါကပျောက်သွားမှာပါ။ အားတဲ့အချိန်တိုင်းလည်း တရားထိုင် ပေးပေါ့”
သူမစကားကြားတော့ ဆရာကသူ့ပုံစံအတိုင်း နွေးထွေးစွာထပ်ပြုံးပြန်သည်။ ထို့နောက် လက်ညှိုးလေးထောင်ကာ
“အဓိက သမီးမမေ့ဖို့က ပန်းချီကားတစ်ချပ်လှခြင်းမလှခြင်းဆိုတာ သမီးဒီပန်းချီကားကို ဘယ်လိုကြည့်မကြည့်ဆိုတာအပေါ်မူတည်တယ်ကွဲ့”
ကြှနျမအကွိုကျဆုံးအရောငျတှကေ အမညျးရယျ၊ အညိုရယျ၊ အဖွူရယျ၊ အစိမျးရယျ၊ နောကျပွီး အပွာရယျ။
တိုကျဆိုငျတာပဲလားတော့မသိပါဘူး။ ကြှနျမအခဈြဆုံးသူတှကေလညျး ၅ယောကျရှိတယျ။
(ဒီတဈခါတော့ နောကျဆုံးကနစေပွောမယျ) သူတို့တှကေ မမ၊ သူငယျခငျြးမလေးနှဥေီး၊ ကိုကို၊ မမေနေဲ့ ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………။
အခဈြဆုံးတဈယောကျကိုတော့ မပွောတော့ပါဘူး။ အသသေတျ…။
အငျး…ကလေးဘဝထဲက ကစားလာတဲ့ကစားနညျးဆိုရငျတော့တဈမြိုးပဲရှိတယျ။ စက်ကူရုပျ ခြိုးတာ။ အဲဒီစက်ကူရုပျခြိုးတာထဲကမှ ကွိုးကွာရုပျလေးခြိုးရတာအကွိုကျဆုံးပဲ။
လှတျမွောကျရာနရောတဈခုဆီ အတောငျဖွနျ့ပွီးပြံသနျးနတေဲ့ပုံလေးလေ။ ဘယျလောကျ လှတျလပျပွီး ဘယျလောကျပေါ့ပါးလိုကျသလဲ။
ဟုတျတယျ။ သူတို့နှဈယောကျက စိတျဆိုးစိတျကောကျနတေဲ့ သူငယျခငျြးတှေ။
အဲ…။ ဒါပမေယျ့ ၄ကကံကောငျးတယျ သူ့ဖကျလှညျ့ပွီး အားပေးစကားပွောမယျ့၅ရှိတယျ။ ၃ကတော့ကံဆိုးတယျ။ ၂ဆိုတဲ့တဈယောကျက သူ့ကိုဂရုမစိုကျဘူးလေ။
ဟှနျး… အဲဒီ၂က မုနျးစရာကွီး။
သူမရှသေို့ သူမရဲ့ဆေးစာအုပျလေးရောကျလာသဖွငျ့ ဒေါကျတာ့ကိုမော့ကွညျ့မိတော့ ဒေါကျတာကဖခငျတဈယောကျလိုပွုံးပွသညျ။
“သမီးကဆရာ့လူနာဖွဈတာမကွာသေးပမေယျ့ သမီးအကွောငျးဆရာသိပါတယျ။ သမီးက အားငယျလှယျတာကိုး။ ဒီမှာကွညျ့စမျးသမီး။ လောကမှာ ဘယျသူမှတဈယောကျတညျးမဟုတျဘူးကှ။ သမီးက ငါကတော့စညျးအပွငျရောကျနပွေီလို့ထငျရငျ သမီးစညျးအပွငျရောကျသှားပွီ။ ဒီလိုမှမဟုတျပဲ ငါ့ပတျဝနျးကငျြကတော့ ငါ့အပျေါနှေးထှေးတယျလို့သတျမှတျလိုကျရငျ သမီးပတျဝနျးကငျြက သမီးကို နှေးနှေးထှေးထှေးဆကျဆံကွလိမျ့မယျ”
ဆရာ့ဆီကဒီလိုစကားတှကွေားရတော့ သူမအားတကျမိသညျ။ မှိုငျးညှို့နသေညျ့မကျြဝနျး တှကေ ခုမှတဖတျြဖတျြလကျလာသညျ။
“ဒါဆိုဆရာ သမီးရဲ့ရောဂါက ကုလို့ပြောကျတယျပေါ့နျော”
“ဒါပေါ့သမီးရဲ့။ ဆရာပေးတဲ့ဆေးလေးတှကေို မှနျမှနျသောကျမယျ။ ဆရာ့စကားတှကေို လိုကျနာမယျဆိုရငျ သမီးရဲ့စိတျကရြောဂါကပြောကျသှားမှာပါ။ အားတဲ့အခြိနျတိုငျးလညျး တရားထိုငျ ပေးပေါ့”
သူမစကားကွားတော့ ဆရာကသူ့ပုံစံအတိုငျး နှေးထှေးစှာထပျပွုံးပွနျသညျ။ ထို့နောကျ လကျညှိုးလေးထောငျကာ
“အဓိက သမီးမမဖေို့က ပနျးခြီကားတဈခပျြလှခွငျးမလှခွငျးဆိုတာ သမီးဒီပနျးခြီကားကို ဘယျလိုကွညျ့မကွညျ့ဆိုတာအပျေါမူတညျတယျကှဲ့”
This entry was posted in ကဗျာ on October 5, 2015 by linyeikhtin.